Facebook hack နညျး ၅ မြိုးနှငျ့ ဘယျလိုကာကှယျကွမလဲ၊ တကယျရော Facebook Hack တာဖွဈပါသလားဆိုတာ - Khit Minnyo
ဆောင်းပါး Facebook hack နညျး ၅ မြိုးနှငျ့ ဘယျလိုကာကှယျကွမလဲ၊ တကယျရော Facebook Hack တာဖွဈပါသလားဆိုတာ
by KhitMinnyo on August 15, 2018 in Articles, Hacking, Hacking Knowledge, Hacking Techniques, ဆောင်းပါး
(ပျေါပငျ) Hacker ပိုး ထ ကွသူမြားအကွောငျး
(Facebook Account hack နညျး ၅မြိုး ပါလို့ စာရှညျမယျဗြ) စ/ဆုံး မဖတျရငျ ဆိုလိုရငျးကို သဘောမပေါကျနိုငျပါ
ဒီအကွောငျးရေးရငျ အခြို့က ကောငျးကောငျးအမွငျကပျနိုငျမှနျး သိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကွုံတာမြားနတောကွောငျ့ရယျ တကယျ့ကို အစဈအမှနျ နားလညျနိုငျစခေငျြတာရယျကွောငျ့ ဒီ Post လေးကို ရေးမိခွငျးပါ။
Hacking ကို စိတျဝငျစားလို့ပါဆိုပွီး မကွာခဏ လာပွောကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အမြားစု (99%) ရဲ့ နောကျဆုံး လိုရငျးက Facebook Account ကို ဘယျလို hack မလဲဆိုတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
Hacking ကို စိတျဝငျစားလို့ပါ။ သငျပါရစေ လို့ ပွောလာသူတိုငျးကို လကျခံခဲ့ခွငျးမရှိပါဘူး။
Hacking ဆိုတာ ဘာလဲ။ Hacking ကို လလေ့ာရငျ ဘာတှအေကြိုးထူးမလဲ
ဘာအလုပျတှေ လုပျလို့ရမလဲ ဆိုတာတှနေဲ့ပတျသကျပွီး
မွနျမာလို ရှငျးပွထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျလေးကို
ဒီ link မှာ ကွညျ့ပွီး နားထောငျနိုငျပါတယျ။
စဆုံး ကွညျ့ပွီး နားထောငျပွီး တကယျတမျးစိတျဝငျစားတယျလို့ ဆုံးဖွတျနိုငျမှ လလေ့ာပါ။ Facebook Account လေး အခြောငျရခငျြတဲ့စိတျကူးနဲ့တော့ Hacking ကို နာမညျဖကျြဖို့မကွံပါနဲ့ လို့ အမွဲတမျး ပွောဖွဈပါတယျ။
အဲသညျတော့ ပွဿ နာက (.....) တှတေောငျ Facebook Account တှကေို Hack နကွေတာပဲ။ စာအုပျလလေ့ာတော့လညျး မပါ။ သငျတနျးတကျတော့လညျး မသငျ။ ဒါဆိုဘာတှသေငျလဲ လို့ ပွနျပွောတာမြိုး ခံရတာပါ။
Hacking ကို Facebook Account ခိုးယူခွငျး လို့ပဲ တရားသေ ယူဆထားကွတာကလား။
Facebook Account ကိုပဲ စိတျဝငျစားကွတော့ ကြှနျတျောလညျး Facebook Account ကိုပဲ ဦးတညျပွောရတာပေါ့။
Facebook Account ကို ဘယျလို Hack နကွေလဲ။ ဘယျလိုကာကှယျကွမလဲပေါ့။
ကြှနျတျော အကွိမျကွိမျ ဆှေးနှေးခဲ့ဖူးပါတယျ။ "Facebook Account လေး hack ခံရလို့ပါ" ဆိုတဲ့ လူတိုငျးရဲ့ 99% က တကယျ hack ခံရတာမဟုတျဘူး ဆိုတဲ့အကွောငျးကိုပါ။ နညျးပညာနဲ့ အလှမျးဝေးပွီး လလေ့ာဖို့လညျး ဝါသနာမပါကွသူ အမြားစုမှာ ကိုယျ့ Facebook Account ကို ဘာနဲ့ ဘယျလိုဝငျရမယျဆိုတာ မသိကွပါဘူး။ ကိုယျ့ Account ကို ဖုနျးနံပါတျနဲ့ ဖှငျ့ထားလား။ Gmail နဲ့ ဖှငျ့ထားတာလား ဆိုတာလညျးမသိကွပါဘူး။ ဒီတော့ Facebook Account logout လုပျပွီးခြိနျ နဲ့ ဖုနျးအသဈပွောငျးတဲ့အခြိနျ Acc ပွနျဝငျတဲ့အခါ ဝငျမရတော့တာကို hack ခံရပွီလို့ ဆိုကွပါတော့တယျ။
အခြို့ဆို Account ဖှငျ့စဉျက ဖုနျးနံပါတျ နဲ့ ဖှငျ့ကွတယျ။ နိုငျငံနရောမှာ မွနျမာ ရှေးတော့ +95 လေး auto တကျသှားတယျ။ ဒါပမေယျ့ Acc လေး တဈစုံတဈရာကွောငျ့ session expire ဖွဈပွီး ပွနျဝငျရတဲ့အခါ +95 ကို ရိုကျမထညျ့တော့ဘဲ 09xxxxxxx တှေ ရိုကျထညျ့ပွီး ဝငျကွတာပါ။ Password အမှနျရိုကျထညျ့ပမေယျ့ ဝငျမရတော့ Account hack ခံရပွီဆိုပွီး ဖွဈကုနျပါတယျ။
နောကျတဈခုက Account ဖှငျ့တဲ့အခါ ပေါကျကရနာမညျတှေ၊ လူနာမညျမဟုတျတာတှေ၊ အတှနျ့အတကျတှပေါတဲ့ အက်ခရာတှနေဲ့ နာမညျပေး Acc ဖှငျ့ကွတော့ Report နညျးနညျးလေး မိတာနဲ့ Account lock ကပြွီး ပွနျဝငျမရတာကိုလညျး Account hack ခံရတယျလို့ ပွောကွပွနျပါတယျ။ lock ကမြှနျးတောငျမသိကွပါ။
နောကျအုပျစုတဈမြိုးကတော့ လိမျညာပွီး လူရှိနျအောငျ hack ခံရခွငျးမြိုးပါ။ ရှငျးအောငျပွောရရငျ Account တှေ အမြားကွီးဖှငျ့ပွီး ဘယျ Acc ကို Hack လိုကျတယျ ဘာညာပေါ့။ ကိုယျ့ Account တှကေို ကိုယျ့ဘာသာ ပွနျဝငျပွီး hack တယျဆိုပွီး ခပျတညျတညျလိမျလိုကျတာမြိုးပါ။ ဒီတော့ Hacker ကွီးဆိုပွီး မသိသူတှကွေား ဆရာတဈဆူဟနျနဲ့ စတိုငျထုတျနိုငျသှားတော့တာပါပဲ။
အဲသညျတော့ ကြှနျတျောတို့တှေ Facebook Account hack ခံရလို့ပါလို့ ကွားမွငျတှနေ့ကွေရတာတှရေဲ့ 1% (တဈရာမှာ တဈယောကျ) ပဲ တကယျ Hack ခံရတာ ဖွဈနတောကို တှရေ့ပါတော့တယျ။
ဒီခါတော့ တကယျတမျး Hack ခံရတဲ့ သူတှထေဲက ထပျခှဲပါမယျ။
တကယျ hack ခံရတဲ့ ထဲမှာ အမြားဆုံး တှရေ့တဲ့ Acc ခိုးယူနညျးကတော့ Recovery နညျးပါပဲ။ Recovery ဆှဲတာ Hacking မဟုတျဘူးလို့ ကြှနျတျော မငွငျးလိုပါ။ Hacking မှာ Impersonating ဆိုတာ ရှိပါတယျ။ အယောငျဆောငျ လိမျလညျခွငျးပါ။ Facebook ကို Impersonating နညျးနဲ့ Recovery ဆှဲပွီး Hacker နာမညျခံခငျြရငျတော့ အင်ျဂလိပျစာ အနညျးငယျ ဖတျတတျဖို့လိုပါတယျ။ ရှီးတတျဖို့လညျး လိုပါတယျ။ ကဲ စရအောငျ။
ပထမဆုံး အနနေဲ့ Browser ကိုဖှငျ့ပွီး facebook.com ကို သှားလိုကျပါ။ ပွီးရငျ Forget password ကိုနှိပျပွီး Account နာမညျနဲ့ ရိုကျရှာလိုကျပါ။ (profile link ထဲက id နံပါတျ သို့မဟုတျ user ရဲ့ text id ကိုလညျး သုံးနိုငျပါတယျ။) ပွီးရငျ ပျေါလာတဲ့စာတှကေို တဈဆငျ့စီဖတျကွညျ့ပွီး ကြှနျတျောက ဘယျသူပါ။ ဖုနျးပြောကျသှားလို့ acc ပွနျဝငျမရဘူး။ mail ထဲဝငျမရတော့လို့ ဘာညာသာရကာတှရေေးပွီး ကိုယျယူမယျ့ Account ပိုငျရှငျဟနျဆောငျပွီး Facebook ဆီမှာ လိမျညာလှညျ့ပတျပွီး တောငျးယူတာပါ။ Photoshop skill လေးလညျး ရှိလို့ကတော့ id အတုပါလုပျပွီး တငျပေးနိုငျတဲ့အတှကျ (ပုံတှကေ wall ထဲဝငျကွညျ့ရငျ ယူလို့ရနတောကို) Facebook team က တကယျထငျပွီး reset link ပွနျပို့လိုကျတဲ့အခါ Acc hack သညျ ဆိုတာတှေ ဖွဈလာတော့တာပါပဲ။
Recovery လို့ လူအမြားစုသိကွတဲ့ Impersonating (အယောငျဆောငျလိမျလညျခွငျး) နညျးလမျးနဲ့ Account ခိုးယူခွငျးမှ ကာကှယျနိုငျဖို့အတှကျတော့
၁။ မိမိနာမညျ အစဈအမှနျ (မှတျပုံတငျနာမညျ) ကိုသာ သုံးပွီး Account ဖှငျ့ပါ။
၂။ Date of Birth ကို မှတျပုံတငျထဲကအတိုငျး ထားပွီး only me လုပျထားပါ။
But it is no use for friends.
၃။ Account ကို မှတျပုံတငျအစဈနဲ့ ID ကွိုတငျထားပါ။ Fb team က ဘယျလိုပငျ ပွနျဖကျြတယျပွောပွော အခကျြအလကျတှကေို မှတျထားပွီးဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ recovery သမားတှကေ ID အတု တငျလိုကျတဲ့အခါ အခကျြအလကျကှာဟမှုကွောငျ့ မအောငျမွငျနိုငျစပေါ။
၄။ မလိုအပျဘဲ Trusted Contact မသုံးပါနှငျ့။ အခြို့က Trusted contact သုံးဖို့အကွံပွုကွလရှေိ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကိုယျက trusted ထညျ့ထားတဲ့သူသညျ တှကေ့ရာ link ကနေ ဝငျကွညျ့နတေတျတဲ့သူမြိုးဆိုရငျ သူ့ acc နဲ့တှဲဆကျနတေဲ့ ကိုယျ့အတှကျလညျး မလုံခွုံပါ။
၅။ two factor အဖွဈ login approval ခံထားပါ။ သို့သျော မပြောကျနိုငျမညျ့ ဖုနျးနံပါတျ ကိုသာ သုံးသငျ့ပါတယျ။ backup code ကိုလညျး အိမျမှာ အမွဲရှိမညျ့ မှတျစု (or) diary စာအုပျထဲ ထညျ့ရေးထားနိုငျပါတယျ။ ဖုနျးပြောကျ ဆငျးကဒျပြောကျတဲ့အခါ ကိုယျ့ဘာသာ ပွနျဝငျမရမှာစိုးလို့ပါ 😁
၆။ ဒီအခကျြကတော့ ပိုအရေးကွီးပါတယျ။ data နဲ့ ဖွတျတဲ့စနဈတှေ ဖွဈတာမို့ Background ကနေ အငျတာနကျသုံးတဲ့ App တှကေို ဖယျရှငျးထားပွီး မလိုအပျဘဲ အငျတာနကျပိတျတာမြိုး မလုပျဖို့ပါ။ ကြှနျတျောတို့ Acc သညျ active ဖွဈနခြေိနျမှာ recovery လုပျသူတှအေတှကျ အခှငျ့အလမျး အလှနျ့အလှနျနညျးပါတယျ။ recovery လုပျပွီး Account ခိုးယူသူတှသေညျ ကြှနျတျောတို့ အငျတာနကျပိတျပွီး အိပျမယျ့အခြိနျမြိုးကို အဓိကထားလရှေိ့ကွပါတယျ။ တဈဖကျမှာ အငျတာနကျဖှငျ့သုံးနတေဲ့အခြိနျမှာ forget password နဲ့ အယောငျဆောငျလိမျတောငျးခွငျးမြိုးအတှကျ Fb က အလှယျတကူ ပွနျပေးမှာမဟုတျလို့ပါပဲ။
ကဲ ဒါဆိုရငျ လိုငျးပျေါမှာ အမြားဆုံး ကွားနရေတဲ့ Fb hack နညျးဆိုတာကွီးကို ပွောပွပွီးသှားပွီ။ ဘယျလို ကာကှယျနိုငျတယျဆိုတာကိုလညျး ပွောပွီးသှားပွီနျော။
ဒုတိယနညျး မစမီ တဈခု ကွားဖွတျပွောပါရစေ။ ဘာလဲဆိုတော့ Social Engineering နဲ့ သကျဆိုငျတာလေးပါ။ အခကျြအလကျ အတုတှနေဲ့ အယောငျဆောငျလိမျညာတဲ့အခါ မှေးနေ့ မှေးလ မှေးရကျတှေ အတိအကြ လိုပါတယျ။ အဲသညျအတှကျ မိမိတို့ရဲ့ DOB ကို ဖြောကျထားလို့ ရတယျဆိုသျောငွားလညျး ဘယျသူဘယျဝါကတော့ ဒီနမှေ့ာ မှေးနဖွေ့ဈပါတယျဆိုပွီး Noti မှာ လာလာပျေါတာ မွငျဖူးကွပါလိမျ့မယျ။ ဒါက ကြှနျတျောတို့ရဲ့ DOB ကို ဖြောကျထားသညျ့တိုငျ တဈဘကျလူ (အယောငျဆောငျ) က သိနနေိုငျတဲ့အခကျြပါ။ အဲသညျတော့ ကိုယျ့ကို ရငျးနှီးအောငျ စကားတှလောပွောပွီး မှေးနမေ့ေးတာမြိုး၊ အသကျဘယျလောကျရှိပွီလဲ (ခုနှဈတှကျဖို့) မေးတာမြိုးကို သတိပွုသငျ့ပါတယျ။
အတိုခြုပျပဲပွောပါရစေ။ အခြို့က မိမိတို့ရဲ့ ဖုနျးနံပါတျ၊ dob ၊ မိမိခဈြသူ စသညျတှကေို password အဖွဈ ထားလရှေိ့ကွတာကွောငျ့ rv သမားတှကေ အလှယျတကူ ခနျ့မှနျးဝငျရောကျသှားနိုငျခွငျးမြိုးပါ။ အခြို့ကကတြော့ ဖုနျးဝယျရငျးနဲ့ ဖုနျးဆိုငျက Account ဖှငျ့ပေးတာကိုပဲ သုံးတာမြိုးဖွဈပွီး password မတေ့ာမြိုး ပွနျလာမေးရငျ ဖွရေလှယျစဖေို့ ဖုနျးဆိုငျတှသေညျ တဈခုတညျးသော password ကိုသာ သုံးကွလရှေိ့တာကွောငျ့ အလှယျတကူ သိသှားခွငျးမြိုးပါ။
ရှမှေ့ာလညျး ပွောပွခဲ့ပွီးပွီနျော။ Fb login ဝငျဖို့အတှကျ phone (or) mail မလိုပါဘူး။ profile link ထဲမှာ ဝငျလို့ရတာ ပါပွီးသားပါ။
ဘယျလိုလဲတော့ ပွနျမမေးပါနဲ့။ ပွနျဖတျပါ။
ဒီစာကိုရေးခွငျးက Fb acc ခိုးဖို့ မွှောကျပေးလိုရငျးမဟုတျဘဲ ဘယျလိုခိုးနကွေတယျ။ ဘယျလို ကာကှယျရမယျဆိုတာကို ပွောလိုရငျးပါ။
ဒီနညျးကို ကာကှယျဖို့ကတော့ strong ဖွဈမယျ့ password မြိုးပဲ ထားပါ။
e.g. khitminnyo123, khitminnyo*124# လိုမြိုး Acc Name နဲ့တှဲပွီး လုံပွီလို့မထငျစလေိုပါ။ အလှယျတကူ ဆိုတာ အဲဒါကိုပွောခွငျးပါ။
ဒီနညျးကို ခုသိပျမတှရေ့တော့ဘူး ဆိုပမေယျ့
တကယျတော့ တှနေ့ရေဆဲပါ။ PlayStore မှာ ရတဲ့ Auto liker ဆိုပွီး like ခိုးတဲ့ App တှမှောလညျး Phishing ရော Session Stealing ရော တှဲပွီး တှရေ့တတျပါတယျ။ PlayStore ကနေ ဆှဲရငျ စိတျခရြတယျဆိုပွီး concept အလှဲကွီးမိနတေဲ့သူတှေ သိပျမြားပါတယျ။ တကယျတော့ PlayStore က ကာကှယျပေးတာက ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ဖုနျးကို ပကျြစီးစမေယျ့ အန်တရာယျရှိတဲ့ App တှကေနသော ကာကှယျပေးခွငျးဖွဈပွီး Phishing နဲ့ Session stealing မြိုးတှကေိုတော့ ကာကှယျပေးမှာမဟုတျပါ။ Token Access တှကေိုလညျး မိမိတို့ဘာသာ ကွညျ့ရှောငျရမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။ google ကတော့ အဲဒါတှအေထိ ဝငျစဈမပေးနိုငျပါ။
မိမိဘာသာ တှလေို့ flag ထောငျခဲ့ရငျတော့ စဈဆေးပေးပါလိမျ့မယျ။ ဒီတိုငျးတော့ no ပါ။
ဒီတော့ စိတျခယြုံကွညျရခွငျးမရှိတဲ့ software တှေ၊ link တှကေနေ ဘယျတော့မှ Account မဝငျမိပါစနေဲ့။
တိုတိပွတျ ပွောရရငျ Access ရယူခွငျးပါ။
Fb နဲ့ login ဝငျပါဆိုတာမြိုးမှာ တှရေ့တတျပါတယျ။ Fb နဲ့ ဝငျခိုငျးတဲ့ app မြိုးတိုငျးကို မယုံရဘူးလို့ မဆိုလိုဘူးနျော။ ဒါပမေယျ့ Fb နဲ့ ဝငျခိုငျးတဲ့အခါ သူက ဘာတှကေို ယူသုံးမယျဆိုတာကို ပွလရှေိ့ပါတယျ။
သခြောပွနျစဈဖို့လိုတယျဗြ။ သူက ကိုယျ့ Acc ကို ဘယျအတိုငျးအတာအထိ သုံးမယျဆိုတာ အဲနရောမှာ မဖွဈမနေ ပွလရှေိ့လို့ပါ။
ဒီနညျးက Account တဈခုလုံးကို ထိနျးခြုပျနိုငျတာမဟုတျလို့ Acc ပါသှားစရာတော့မရှိပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ Acc ထဲက အခကျြအလကျတှကေိုတော့ အတိုငျးအတာတဈခုထိ ဝငျကွညျ့လို့ရစပေါတယျ။ Fb မှာတှရေ့တဲ့ သငျဘယျတော့ကဘြာဖွဈမယျဆိုတာမြိုးကနေ သငျ့အတှကျ အဖွသေိရနျနှိပျပါဆိုတာတှသေညျလညျး Access ရယူတာတှသောဖွဈပါတယျ။ အခကျြအလကျအခြို့ ပါသှားတာကလှဲရငျ Acc ကို password ပွောငျးယူတဲ့အထိတော့ လုပျမရပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ အပျေါမှာပွောခဲ့တဲ့ Recovery ဆှဲဖို့အတှကျတော့ လုံလောကျတဲ့အခကျြအလကျတှကေို ရသှားစနေိုငျပါတယျ။ သတိထားရှောငျပါ။ ၂၀၂၀ မှာ သငျဘာဖွဈမလဲတို့။ ကမ်ဘာမှာ သငျနဲ့အတူဆုံး မငျးသား မငျးသမီးတို့ ဆိုတဲ့ တကယျမဟုတျတာတှအေပျေါ သာယာမနနေဲ့ပေါ့။ သာယာခငျြရငျလညျး ဝငျပွီးတာနဲ့ ပွနျထှကျဖို့ မမနေဲ့ပေါ့ဗြာ။
Keylogger, Shoulder Surfing & Other's Device Using
ဒါက မကွာခဏ ကွုံတှရေ့တဲ့ ကိစ်စတဈခုလညျး ဖွဈပါတယျ။ ကိုယျနဲ့ ရငျးနှီးတဲ့သူက အကငျြ့မကောငျးတာမြိုးပေါ့။ ကိုယျက ကိုယျ့ဖုနျး ပကျြလို့ဖွဈစေ၊ ဘကျထရီကုနျသှားလို့ဖွဈစေ အခွားတဈယောကျရဲ့ ဖုနျး သို့မဟုတျ ကှနျပြူတာ မှာ ခဏဝငျသုံးတဲ့အခါ saved password လုပျမိတာမြိုး၊ နောကျတဈခကျြက browser မှာ login ဝငျပွီးရငျ logout ပွနျမထှကျဘဲ browser ပိတျခဲ့ရုံနဲ့ ပွနျထှကျပွီးပွီထငျတဲ့သူမြိုး၊ ကိုယျဝငျသုံးမယျ့ ကှနျပြူတာ မှာ Keylogger ရှိနတောမြိုး၊ ကိုယျက အခွားသူတှရှေိနခြေိနျမှာ Account login ရိုကျဝငျမိတာမြိုးတှေ ရှောငျပါ။ ကှနျပြူတာ ကီးဘုတျပျေါက ကိုယျ့လကျလှုပျရှားမှုကိုကွညျ့ပွီး password ခနျ့မှနျးနိုငျသလို phone keyboard ကနေ ရိုကျထညျ့တဲ့အခါမှာလညျး password ကို ကွညျ့နသေူက သိနိုငျပါတယျ။ မိတျဆှရေဲ့ Facebook Account ကို password ပဲ သိရုံနဲ့တငျ ဝငျလို့ရတယျဆိုတာကို လုံးဝ မမပေ့ါနဲ့။
ဘယျလို Acc ခိုးယူတယျဆိုတာတှေ သိပွီဆိုတော့ ဘယျလိုရှောငျရမယျဆိုတာ တှကျလို့ရပွီပေါ့။
Facebook ကို Hack သညျဆိုရာဝယျ
ကြှနျတျောတို့ ပွောကွတာရှိသေးတယျဗြ။ ဘာတဲ့...... Facebook Hack နညျး ဘာညာသာရကာပေါ့။
ဒါက လူအမြားစုသိကွတဲ့ အပျေါယံအမွငျပါ။ နညျးနညျးလေး ပိုပွီး အတှငျးကကြ လလေ့ာကွညျ့ရအောငျ။ လူပွိနျးနားလညျအောငျပဲ ရေးပါရစေ။ ပညာရပျအချေါအဝျေါတှကေို တတျနိုငျသမြှ ဒီအပိုငျးမှာ ရှောငျရေးပါမယျ။ အမှနျကို အားလုံး သိစခေငျြလို့ပါ။
Facebook ဆိုတာ web server တဈခုပါပဲ။ ဆာဗာဆိုတာ အခကျြအလကျတှသေိမျးထားတဲ့ ဂိုထောငျတဈခုနဲ့ တူပါတယျ။ အဲသညျ Facebook မှာ Account ဖှငျ့သုံးနတေဲ့ ကြှနျတျောတို့က client တှပေါ။ ဆာဗာကအခကျြအလကျကို ရယူအသုံးပွုသူ user တှပေေါ့။
Facebook account တှအေတှကျ ထားတဲ့ Account server မှာ ကြှနျတျောအပါအဝငျ အခွားသော Facebook အသုံးပွုသူတှရေဲ့ အခကျြအလကျတှနေဲ့ လြှို့ဝှကျစကားလုံး (password) တှကေို သနျးနဲ့ခြီပွီး သိမျးဆညျးထားပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ Facebook ကို Hack နိုငျပွီဆိုတာနဲ့ Account တဈခုမဟုတျပါဘူး။ ဇူကာဘတျ အပါအဝငျ သနျးနဲ့ခြီတဲ့ Facebook Account တှကေို တဈခကျြတညျး ရသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါမှ Facebook ကို Hack တာလို့ ချေါလို့ရပါလိမျ့မယျ။
အဲလိုမဟုတျဘဲနဲ့ အပျေါမှာ ကြှနျတျောပွောပွခဲ့တဲ့ နညျးလမျးမြိုးတှနေဲ့ မောငျကကွီး၊ မခခှေးတို့ရဲ့ Account လေးတှကေို hack နိုငျခဲ့တယျဆိုရငျတောငျ ဒါက Facebook ကို hack တာမဟုတျပါဘူး။ user လို့ချေါတဲ့ အသုံးပွုသူရဲ့ မသိနားမလညျမှုဆိုတဲ့ vulnerability ပျေါအခွခေံပွီး hack တာပါ။ မောငျကကွီးကို hack တာသာဖွဈပွီး Facebook ကို hack တာ လုံးဝလုံးဝ မဟုတျရပါဘူးဗြာ။
ဒီတော့ ပညာရှငျတှကေ Facebook hack တယျလို့ ဘယျအခါမှာမှ သုံးတယျဆိုတာ သိပွီထငျပါတယျ။
Facebook သညျ ကြှနျတျောတို့ Account တှေ လုံခွုံမှုရှိစရေေးအတှကျ security professional တှကေို လစာတှအေမြားကွီးပေးပွီး ခနျ့ထားပါတယျ။ သူနဲ့သကျဆိုငျတဲ့ သူ့ဆာဗာရဲ့ လုံခွုံမှုအတှကျ အခြိနျပွညျ့ စောငျ့ကွညျ့ပေးနသေလို ကြှနျတျောတို့အသုံးပွုသူတှအေတှကျလညျး အခြိနျပွညျ့ လုံခွုံမှု ပေးနပေါတယျ။ ဒါတှတေငျမက Bug Bounty Programme တှကေိုလညျး ထားရှိပေးထားပွီးတော့ Facebook ရဲ့ အားနညျးခကျြတှကေို ရှာဖှတှေရှေိ့ပွီး report (အစီရငျခံစာ) ရေးပေးနိုငျသူတှကေိုလညျး ရှာဖှတှေရှေိ့တဲ့ အားနညျးခကျြအပျေါ ထိခိုကျနိုငျမှု အတိုငျးအတာနဲ့ တှကျခကျြအဖွထေုတျပွီး ထိုကျထိုကျတနျတနျ ဆုခြီးမွငျ့မှုတှကေို ပွုလုပျပေးလရှေိ့တာကွောငျ့ Facebook ကို တကယျ hack လို့ ရနိုငျတဲ့ နညျးလမျးတှတေ့ာနဲ့ (Facebook က သိရှိပွီး မပွငျဆငျနိုငျသေးခငျမှာ) ခကျြခငျြး report လုပျပွီး ဒျေါလာ၃သောငျးလောကျထိ ရနိုငျတဲ့ ဆုကွေးငှပေဲ ယူမှာပေါ့ဗြာ။ အဲလိုမလုပျဘဲနရေငျ တဈယောကျယောကျက ထပျရှာတှသှေ့ားပွီး အစီရငျခံလိုကျရငျ ကိုယျရမယျ့ဆုငှေ အခွားသူရသှားမယျ့အပွငျ Facebook က fix လုပျလိုကျတဲ့အခါ ကိုယျလညျးသုံးမရဘဲ အလဟဿ ဖွဈသှားရမှာပဲလေ။ ဒီတော့ Facebook ဆိုတာ အားနညျးခကျြတဈခုတှတေ့ာနဲ့ ခကျြခငျြးရှာဖှပွေငျဆငျနတေဲ့ Active security team ကို ပိုငျဆိုငျထားသလို ပွငျပလလေ့ာသူတှရေဲ့ ကာကှယျပေးမှုတှပေါ ပူးပေါငျးဖွညျ့စှကျထားလို့ တကယျခိုငျမာတဲ့ လုံခွုံမှုရှိတဲ့နရောတဈခုဖွဈပါတယျ။ မိမိရဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြကိုတော့ only me post မြိုးနဲ့ မသိမျးနဲ့ပေါ့ဗြာ။ ဒါတှကေတော့ system upgrade လုပျတဲ့အခါတှမှော ပေါကျကွားတတျလို့ပါ။ နောကျပွီး chatting မပေါကျကွားခငျြရငျလညျး secret conversation ဆိုတာရှိတာကွောငျ့ အဲကနေ လုံခွုံစိတျခစြှာ သုံးလို့ရပါသေးတယျ။ တဈဘကျက ကွညျ့ပွီးတာနဲ့ ကိုယျသတျမှတျပေးထားတဲ့အခြိနျ (ဥပမာ ၅စက်ကနျ့) အတှငျး ပကျြသှားမှာဖွဈလို့ သူ့ acc (or) ကိုယျ့ acc ပါသှားခဲ့ရငျတောငျ ဒါက ပေါကျကွားစရာ မရှိတော့ဘူးပေါ့။
Facebook တငျမကဘူးနျော။ လိုငျးပျေါမှာ တှနေ့ကွေတဲ့ gmail hack ဆိုတာလညျး အဲသဘောတရားတှအေတိုငျးခညျြးပဲဗြ။
ဒီတော့ ကြှနျတျောတို့အနနေဲ့ Facebook hack လို့ နရောတကာမှာ သုံးနပွေောနကွေမယျ့အစား တကယျ့အမှနျတရားကို သိရှိသငျ့ပွီလို့ ယူဆပါတယျ။ နောကျတဈခုအနနေဲ့ Hacking ဆိုတာ Facebook, gmail user တှရေဲ့ account လေးတှကေို ဝငျကွညျ့နိုငျရုံလောကျ အလှနျကဉျြးမွောငျးတဲ့ ပညာရပျမဟုတျပါဘူး။
Programming, Web Developing, Networking နဲ့ Server/System Administration တှပေျေါ အခွခေံထားတဲ့ Hacking ဆိုတာသညျ ရှိသမြှ ကှနျပြူတာပညာရပျတိုငျးနဲ့ ဆကျနှယျမှုရှိနပေါတယျ။
အထူးသဖွငျ့ ယနခေ့တျေလို Cyber Security အတှကျ လိုအပျခကျြပိုမြားမြားလာတဲ့ ခတျေမှာ Facebook Account လေးတှကေို ဘယျလိုခိုးရမလဲဆိုတာလေးနဲ့ Hacking ဆိုတာဒါပဲဆိုတဲ့ သေးသိမျတဲ့အမွငျတှကေို စှနျ့ခှာခြိနျတနျပွီဖွဈကွောငျး (ပျေါပငျ) Hacker ပိုး ထ ကွသူအပေါငျးကို နှိုးဆျောတိုကျတှနျးရငျး နိဂုံးခြုပျပါကွောငျးခငျဗြာ....
Facebook ပျေါ က Hacking အယူအဆမြား နှငျ့ Facebook hack နညျးမြား အကွောငျး (Old Post)
(စာအမှန် မမြင်ရပါက အောက်တွင် Zawgyi Version ရှိပါသည်။ အောက်ဆွဲချပြီး ဆက်ဖတ်ကြည့်ပါ)
Facebook တို့လို လူမှုကှနျယကျတှေ တိုးတကျလာခြိနျမှာ နညျးပညာအသဈအဆနျးတှကေို လူတှေ ပိုစိတျဝငျစားလာကွပါတယျ။ နညျးလမျးတှေ ရှာဖှေ ကွံဆ လာကွသလို နညျးပညာတှကေို ပိုပိုပွီး သိမွငျနှံ့စပျလာကွပါတယျ။ အဲသညျလို နညျးပညာတှထေဲမှာမှ လူသိပိုမြားလာတဲ့ နယျပယျတဈရပျကတော့ Hacking ပါပဲ။
Hacking မှာမှ လူတှကွေား ပိုပွီး Popular ဖွဈတာက Facebook လို လူမှုကှနျယကျ တှနေဲ့ online game တှေ ခြိတျဆကျနိုငျသလို Facebook account တှနေဲ့ပါ ခြိတျနိုငျတဲ့ gmail ကို ပိုပွီး လူသိမြားလာကွပါတယျ။ Facebook hacking မှ hacking, gmail hacking မှ hacking လို့ ထငျလာကွသလို hacking လို့ ပွောလိုကျတာနဲ့တငျ Facebook နဲ့ Gmail account တှကေို hack တာလို့ ပွေးမွငျကွတဲ့အထိ Hacking ကို နယျမွဘေောငျခတျပဈလိုကျကွတော့တာပါ။
Hacking နဲ့ အခွား နညျးပညာ နယျပယျတှမှော အမွငျကယျြခငျြရငျတော့ အဲသညျ ခတျထားတဲ့ ဘောငျတှကေို ဖယျပဈနိုငျဖို့ လိုပါတယျ။ အဲသညျဘောငျတှကေို မိမိဘာသာ ခတျပဈလိုကျကွတာကို မမပေ့ါနဲ့။
ဥပမာလေး ပွောကွညျ့ရအောငျ။ အငျဂငျြနီယာ နဲ့ ဆောကျလုပျရေး ကို လူတှေ တှဲ မွငျကွလေ့ ရှိပါတယျ။ အငျဂငျြနီယာတှေ သငျခဲ့ရတဲ့ Engineering ဆိုတာ ပညာရပျနယျပယျ (technical) နယျပယျပါ။ တိုကျဆောကျတဲ့နရောမှာသုံးရငျ တိုကျဆောကျခွငျး ဖွဈပွီး တံတားထိုးတဲ့နရောမှာသုံးရငျ တံတားတညျဆောကျခွငျး ဖွဈသှားပါတယျ။ အဲဒီ တညျဆောကျမှုအပိုငျးတှကေကတြော့ အသုံးခနြယျပယျ (field) ဖွဈပါတယျ။ Field မှာ မဆောကျခငျ Techniques (Technics) တှေ သိထား တတျထားဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ဒါ့ပွငျ Field မှာ မိမိဘာသာ ဦးဆောငျမဆောကျမီ အခွားသူတှရေဲ့ ဆောကျလုပျရေး တှမှော ဝငျလလေ့ာကူခွငျးဖွငျ့လညျး လိုအပျတဲ့အတှအေ့ကွုံကို ရယူနိုငျပါတယျ။
Hacking ပိုငျးနဲ့ ပွနျခြိတျရအောငျပါ။ အထကျက ဥပမာလိုပါပဲ။ Hacking ဆိုတာ Technical ပိုငျး ပါ။ Gmail hacking, Facebook hacking နဲ့ web hacking ဆိုတာတှကေ အသုံးခနြယျပယျ Field ဖွဈပါတယျ။ တိုကျဆောကျမယျ့ အငျဂငျြနီယာ သညျ တိုကျဆောကျနညျး တတျမွောကျဖို့လိုသလို တံတားတညျဆောကျမယျ့ အငျဂငျြနီယာ သညျလညျး တံတားဆောကျလုပျခွငျး techniques တှကေို တတျမွောကျထားဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ထို့အတူပါပဲ Hacking field အတှကျလညျး သကျဆိုငျရာ Technics တှကေို သိထားတတျထားမှ အသုံးခလြို့ ရမှာဖွဈပါတယျ။
တိုကျဆောကျနညျး technique တှကေို တိုကျဆောကျတဲ့နရောမှာ အသုံးပွုခွငျး အားဖွငျ့ တိုကျဆောကျခွငျး ဖွဈလာသလို သကျဆိုငျရာ technics တှကေို အသုံးခပြွီး Facebook, gmail, website, server, .... အစရှိတာတှေ လုပျဆောငျရာမှ Facebook hacking, gmail hacking, website hacking, server hacking, web cam hacking, .... စတဲ့ system hacking ဆိုတဲ့ field (အသုံးခနြယျပယျ) တှေ ဖွဈသှားပါတော့တယျ။
Facebook တို့ Gmail တို့ ကို hack တယျလို့ ဆိုရာမှာတော့ အမြားစု မသိကွတဲ့ အပိုငျးလေး အနညျးငယျ ပွောပွခငျြပါတယျ။ Account ဖှငျ့သုံးနကွေတဲ့ Facebook တို့ Gmail တို့လို့ Acc တှအေပျေါ ကြှနျတျောတို့ သာမနျမွငျနတောတှေ ခဏဖယျထားလိုကျရအောငျ။
အဆိုပါ Account တှမှော Level နှဈခု ရှိပါတယျ။ အသုံးပွု (user) က ကိုယျ့ဘာသာကိုယျ ထိနျးသိမျးရတဲ့ user level နဲ့ မူလပိုငျရှငျဖွဈတဲ့ Facebook တို့ Google တို့ကနေ ထိနျးသိမျးထားရှိတဲ့ Server level ပါ။ User level အနနေဲ့ ဖှငျ့ထားတဲ့ gmail ကို hack လို့ ရ သှားရငျ Account တဈခုသာ ရမှာဖွဈပါတယျ။ Server level အနနေဲ့ ဝနျဆောငျမှုပေးထားတဲ့ gmail accounts server ကို hack လို့ ရသှားရငျတော့ သနျးနဲ့ခြီတဲ့ Accounts တှကေို တဈပွိုငျနကျတညျး ရရှိသှားနိုငျပါတယျ။ account server မှာက သနျးနဲ့ခြီတဲ့ Account တှကေို သိမျးထားတာကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။ user level နဲ့ server level ကှာတာလေးတဈခု ထုတျပွောပွတာပါ။
Server level မှာက Facebook တို့ Google တို့ရဲ့ security team က ပညာရှငျတှနေဲ့ အခြိနျပွညျ့ စောငျ့ကွညျ့ပေးနကွေသလို bug bounty programme တှေ ပွုလုပျထားရှိပွီး Vulnerability ချေါ အားနညျးခကျြတှကေို ရှာဖှတှေရှေိ့ပွီး report တငျပေးနိုငျသူတှအေတှကျ ထိုကျထိုကျတနျတနျ ဆုကွေး ခြီးမွငျ့ပေးခွငျးအားဖွငျ့ လုံခွုံမှုကို ပိုမိုခိုငျမာလာအောငျ ဖနျတီးပေးထားပါတယျ။
User level မှာတော့ မိမိတို့ရဲ့ Account ကို မိမိတို့ဘာသာ ထိနျးသိမျးကွရပါတယျ။ Phishing link တှကေနေ မဝငျမိအောငျ url တှကေို သခြောစဈဆေးတတျဖို့လိုသလို encrypt ပွုလုပျမထားတဲ့ ကှနျယကျတှမှော သုံးမိတာမြိုး၊ free ပေးပွီး ထောငျဖမျးတဲ့ wifi ကှနျယကျမြိုးတှနေဲ့ ခြိတျဆကျသုံးမိပွီး login ဝငျမိတာတှေ၊ weak passwords တှလေို အလှယျတကူခနျ့မှနျးနိုငျစတေဲ့ password တှေ အသုံးပွုတာမြိုး၊ အခကျြအလကျ ကောငျးစှာ ဖွညျ့သှငျးထားခွငျးမရှိတာမြိုး၊ security layer ထားရှိအသုံးပွုခွငျးမရှိတာမြိုး တှကေို အထူးဂရုပွုမိဖို့လိုအပျပါတယျ။ ဒါတှကေို ရှောငျရှားနိုငျဖို့အတှကျကတော့ ထိုကျသငျ့တဲ့ security knowledge တှေ ရှိဖို့ လိုအပျပါတယျ။
Facebook ပျေါမှာ acc hack ခံရပါတယျ ဆိုတာတှထေဲက အခြို့က တကယျ hack ခံရခွငျးမဟုတျပါ။ အခြို့က မိမိ acc ဖှငျ့စဉျက mail ရော password ရောကို မိမိဘာသာ မှတျကိုမမှတျမိတော့လို့ ဝငျမရတော့တာမြိုးကို hack ခံရတယျဆိုပွီး (မသိဘဲ) ပွောကွတာ ဖွဈပါတယျ။ တကယျ Account ပါသှားသူတှကေလညျး အောကျပါ အခကျြတှကွေောငျ့ ပါသှားကွတာပါ။
1.မိမိ acc မှာ မိမိဘာသာ hack ခံရကွောငျး တမငျ ဖနျတီးလုပျကွံထားတာ
2. ဒီ link ကိုနှိပျကွညျ့ ဘာဖွဈမယျ။
သငျ့အဖွကေိုသိဖို့ ဒါလေးနှိပျကွညျ့ပါ ဆိုတဲ့ post မြိုးတှေ တှမေိ့ကွမှာပါ။ အဲသညျကနေ user ရဲ့ အရေးပါတဲ့ information တှနေဲ့ token access ကို ခိုးယူခံရတာ
3. စိတျခရြခွငျးမရှိတဲ့ app တှကေို login with Facebook နဲ့ ဝငျထားမိတာ
4. Information အပွညျ့အစုံ ထညျ့ထားခွငျးမရှိတာကွောငျ့ ဖွဈစေ၊ security layer တှေ အသုံးမပွုတာကွောငျ့ ဖွဈစေ recovery ဆှဲခံလိုကျရတာ
5. သခြော သိခွငျးမရှိပါဘဲက Free wifi တှခြေိတျပွီး အရမျးကာရော login ဝငျ သုံးမိတာ
6. "Follower တှေ ဘယျလောကျရမယျ"
"သငျ့ fri ထဲက ဘယျသူတှရေဲ့ လြှို့ဝှကျ ဗီဒီယိုဖိုငျတှေ ပေါကျကွားသှားပါတယျ။ သိခငျြရငျ ဒီ link ကိုကွညျ့ "
စသညျဖွငျ့ပေါ့။ user တှကေို စိတျဝငျစားအောငျ ဆှဲဆောငျပွီး phishing ခထြားတဲ့ link ထဲ ဝငျအောငျ စညျးရုံခွငျးကို မသိဘဲ ဇှတျဝငျရာက account ပါသှားတာ။
Gmail hacker ဆိုတဲ့ software အတုတှကေို သူမြား account ရခငျြဇောနဲ့ ကိုယျ့ acc ဝငျမိရာက သူမြားဟာမရဘဲ ကိုယျ့ဟာ ပေးလိုကျရတာ။
(6 နဲ့7ကို Social Engineering ဟု ချေါသညျ)
8. ကိုယျ ယုံကွညျရသူ တဈစုံတဈယောကျရဲ့ Facebook account နဲ့ တထရောတညျး တူအောငျ အတုဖှငျ့ထားပွီး အယောငျဆောငျ အယုံသှငျးလကျြ account လုယူခံရတာ
9. ကိုယျ့ဖုနျးထဲကို စိတျခယြုံကွညျရခွငျးမရှိတဲ့ apk တှေ သူမြားထညျ့သှားတာမြိုး၊ ကိုယျ့ဘာသာ ဆှဲထညျ့မိရာမြိုးတှကေနတေဈဆငျ့ Plugin ပါလာတဲ့ keyloggers တှကေနတေဈဆငျ့ ကိုယျ့ acc တှေ ပါသှားတာမြိုး
ကိုယျ့စကျမဟုတျဘဲ အခွားသူတှရေဲ့ စကျတှေ (ဖုနျး or computer) တှမှော ကိုယျ့ acc ခဏ ဝငျသုံးမိရာကတဈဆငျ့ account ပါသှားတာမြိုး
10. Account login ဝငျတဲ့နရောမှာ အားနညျးလှနျးတဲ့ (ခနျ့မှနျးရ လှယျကူတဲ့) passwords တှကေို သုံးမိတာမြိုး၊ နောကျပွီး ဘာ acc ဆိုလညျး ဖှငျ့၊ ညာအကောငျ့ဆိုလညျး ဖှငျ့၊ passwords ကို ဘာလာလာ ဒီတဈမြိုးပဲ လုပျပွီး မှတျထားတာမြိုး
အထကျပါအခကျြတှကွေောငျ့သာ ဖွဈလေ့ ရှိပါတယျ။
ဒါက user level နဲ့ သကျဆိုငျပွီး account ကို အသုံးပွုသူက သတိထားရမယျ့ အပိုငျး ဖွဈပါတယျ။
Facebook (or) Google တို့က သူတို့ရဲ့ အကြိုးအမွတျအတှကျ မဟုတျရငျတောငျ ဂုဏျသိက်ခာအတှကျ server level ကနေ တတျနိုငျသမြ တိုးမွှငျ့ ကာကှယျပေးမှုတှေ လုပျထားပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ server level ကနေ ဘယျလိုပငျ ကာကှယျပေးထားပါစေ user တှအေနနေဲ့ မိမိတို့ လုံခွုံရေးအတှကျ ဆောငျရနျရှောငျရနျတှကေို ဂရုစိုကျလိုကျနာဖို့တော့ လိုပါတယျ။
Account ကာကှယျရေးတှေ နဲ့ ဘယျလို ခိုးသှားတယျဆိုတဲ့ နညျးတှကေို ပွောနတောနဲ့ပဲ မူလ ရညျရှယျခကျြ ပြောကျတော့မယျ။ 😁
အစပိုငျးမှာ ကြှနျတျော ဆှေးနှေးခဲ့သလိုပါပဲ။ Hacking ဆိုတာ technical ပိုငျးပါ။ Gmail ကို hack တယျ၊ Facebook ကို hack တယျ၊ website ကို hack တယျ ဆိုတာတှဟော အသုံးခမြှုနယျပယျ field သာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီတော့ Hacking technics (techniques) တှကေို ကြှမျးကငျြလာတဲ့အခါ ဘယျနရောမှာ ဘာသုံးရမယျ (တိုကျဆောကျရငျ ဘယျလိုဆောကျမယျ၊ တံတားကြ ဘယျလို ထိုးရမယျ) စသညျဖွငျ့ ကြှမျးဝငျလာပါတော့တယျ။
နောကျတဈခကျြက Facebook ပျေါမှာ အမြားစု သိနေ ထငျနကွေသလို Hacker တှဆေိုတာ လူဆိုးတှခေညျြးပဲ မဟုတျကွပါဘူး။ ဘယျနရောမဆို အဖွူနဲ့ အမညျး၊ အလငျးနဲ့အမှောငျ ဆနျ့ကငျြဘကျတှေ ရှိကွပါတယျ။ မိမိရဲ့ လုပျရပျနဲ့ ရပျတညျမှုအပျေါ မိမိဘာသာ တာဝနျယူကွရမှာပါ။
ဒါကွောငျ့ နညျးပညာတှကေို လူအမြားအတှကျ ထိခိုကျနဈနာမှုမရှိစဘေဲ တိုးတကျအောငျမွငျအောငျ ကွိုးစားရငျး အမှနျတရားကို သိမွငျလကျခံ မှနျကနျစှာရပျတညျကငျြ့ကွံရငျး လောကကို အလငျးပေးနိုငျသူမြား ဖွဈကွပါစကွေောငျး နှဈသဈဆုမှနျကောငျး တောငျးလိုကျရပါသညျခငျဗြာ
လာရောကျ အားပေးဖတျရှုသူအပေါငျးကို အထူး ကြေးဇူးတငျရှိပါတယျခငျဗြာ
Hacking ကို လကျတှခေ့ညျြး လလေ့ာလိုသူတှအေတှကျ Grade3Hacking "Hacking ဒုတိယတနျး" စာအုပျကို အားပေးနိုငျပါပွီဗြ ..........
90% လကျတှသေ့ငျခနျးစာမြား ပါဝငျသညျ့
"Hacking ဒုတိယတနျး" စာအုပျ
(ပေါ်ပင်) Hacker ပိုး ထ ကြသူများအကြောင်း
(Facebook Account hack နည်း ၅မျိုး ပါလို့ စာရှည်မယ်ဗျ) စ/ဆုံး မဖတ်ရင် ဆိုလိုရင်းကို သဘောမပေါက်နိုင်ပါ
ဒီအကြောင်းရေးရင် အချို့က ကောင်းကောင်းအမြင်ကပ်နိုင်မှန်း သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကြုံတာများနေတာကြောင့်ရယ် တကယ့်ကို အစစ်အမှန် နားလည်နိုင်စေချင်တာရယ်ကြောင့် ဒီ Post လေးကို ရေးမိခြင်းပါ။
Hacking ကို စိတ်ဝင်စားလို့ပါဆိုပြီး မကြာခဏ လာပြောကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အများစု (99%) ရဲ့ နောက်ဆုံး လိုရင်းက Facebook Account ကို ဘယ်လို hack မလဲဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Hacking ကို စိတ်ဝင်စားလို့ပါ။ သင်ပါရစေ လို့ ပြောလာသူတိုင်းကို လက်ခံခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။
Hacking ဆိုတာ ဘာလဲ။ Hacking ကို လေ့လာရင် ဘာတွေအကျိုးထူးမလဲ
ဘာအလုပ်တွေ လုပ်လို့ရမလဲ ဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး
မြန်မာလို ရှင်းပြထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို
ဒီ link မှာ ကြည့်ပြီး နားထောင်နိုင်ပါတယ်။
စဆုံး ကြည့်ပြီး နားထောင်ပြီး တကယ်တမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ ဆုံးဖြတ်နိုင်မှ လေ့လာပါ။ Facebook Account လေး အချောင်ရချင်တဲ့စိတ်ကူးနဲ့တော့ Hacking ကို နာမည်ဖျက်ဖို့မကြံပါနဲ့ လို့ အမြဲတမ်း ပြောဖြစ်ပါတယ်။
အဲသည်တော့ ပြဿ နာက (.....) တွေတောင် Facebook Account တွေကို Hack နေကြတာပဲ။ စာအုပ်လေ့လာတော့လည်း မပါ။ သင်တန်းတက်တော့လည်း မသင်။ ဒါဆိုဘာတွေသင်လဲ လို့ ပြန်ပြောတာမျိုး ခံရတာပါ။
Hacking ကို Facebook Account ခိုးယူခြင်း လို့ပဲ တရားသေ ယူဆထားကြတာကလား။
Facebook Account ကိုပဲ စိတ်ဝင်စားကြတော့ ကျွန်တော်လည်း Facebook Account ကိုပဲ ဦးတည်ပြောရတာပေါ့။
Facebook Account ကို ဘယ်လို Hack နေကြလဲ။ ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲပေါ့။
ကျွန်တော် အကြိမ်ကြိမ် ဆွေးနွေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ "Facebook Account လေး hack ခံရလို့ပါ" ဆိုတဲ့ လူတိုင်းရဲ့ 99% က တကယ် hack ခံရတာမဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပါ။ နည်းပညာနဲ့ အလှမ်းဝေးပြီး လေ့လာဖို့လည်း ဝါသနာမပါကြသူ အများစုမှာ ကိုယ့် Facebook Account ကို ဘာနဲ့ ဘယ်လိုဝင်ရမယ်ဆိုတာ မသိကြပါဘူး။ ကိုယ့် Account ကို ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ ဖွင့်ထားလား။ Gmail နဲ့ ဖွင့်ထားတာလား ဆိုတာလည်းမသိကြပါဘူး။ ဒီတော့ Facebook Account logout လုပ်ပြီးချိန် နဲ့ ဖုန်းအသစ်ပြောင်းတဲ့အချိန် Acc ပြန်ဝင်တဲ့အခါ ဝင်မရတော့တာကို hack ခံရပြီလို့ ဆိုကြပါတော့တယ်။
အချို့ဆို Account ဖွင့်စဉ်က ဖုန်းနံပါတ် နဲ့ ဖွင့်ကြတယ်။ နိုင်ငံနေရာမှာ မြန်မာ ရွေးတော့ +95 လေး auto တက်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် Acc လေး တစ်စုံတစ်ရာကြောင့် session expire ဖြစ်ပြီး ပြန်ဝင်ရတဲ့အခါ +95 ကို ရိုက်မထည့်တော့ဘဲ 09xxxxxxx တွေ ရိုက်ထည့်ပြီး ဝင်ကြတာပါ။ Password အမှန်ရိုက်ထည့်ပေမယ့် ဝင်မရတော့ Account hack ခံရပြီဆိုပြီး ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက Account ဖွင့်တဲ့အခါ ပေါက်ကရနာမည်တွေ၊ လူနာမည်မဟုတ်တာတွေ၊ အတွန့်အတက်တွေပါတဲ့ အက္ခရာတွေနဲ့ နာမည်ပေး Acc ဖွင့်ကြတော့ Report နည်းနည်းလေး မိတာနဲ့ Account lock ကျပြီး ပြန်ဝင်မရတာကိုလည်း Account hack ခံရတယ်လို့ ပြောကြပြန်ပါတယ်။ lock ကျမှန်းတောင်မသိကြပါ။
နောက်အုပ်စုတစ်မျိုးကတော့ လိမ်ညာပြီး လူရှိန်အောင် hack ခံရခြင်းမျိုးပါ။ ရှင်းအောင်ပြောရရင် Account တွေ အများကြီးဖွင့်ပြီး ဘယ် Acc ကို Hack လိုက်တယ် ဘာညာပေါ့။ ကိုယ့် Account တွေကို ကိုယ့်ဘာသာ ပြန်ဝင်ပြီး hack တယ်ဆိုပြီး ခပ်တည်တည်လိမ်လိုက်တာမျိုးပါ။ ဒီတော့ Hacker ကြီးဆိုပြီး မသိသူတွေကြား ဆရာတစ်ဆူဟန်နဲ့ စတိုင်ထုတ်နိုင်သွားတော့တာပါပဲ။
အဲသည်တော့ ကျွန်တော်တို့တွေ Facebook Account hack ခံရလို့ပါလို့ ကြားမြင်တွေ့နေကြရတာတွေရဲ့ 1% (တစ်ရာမှာ တစ်ယောက်) ပဲ တကယ် Hack ခံရတာ ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတော့တယ်။
ဒီခါတော့ တကယ်တမ်း Hack ခံရတဲ့ သူတွေထဲက ထပ်ခွဲပါမယ်။
တကယ် hack ခံရတဲ့ ထဲမှာ အများဆုံး တွေ့ရတဲ့ Acc ခိုးယူနည်းကတော့ Recovery နည်းပါပဲ။ Recovery ဆွဲတာ Hacking မဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်တော် မငြင်းလိုပါ။ Hacking မှာ Impersonating ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ အယောင်ဆောင် လိမ်လည်ခြင်းပါ။ Facebook ကို Impersonating နည်းနဲ့ Recovery ဆွဲပြီး Hacker နာမည်ခံချင်ရင်တော့ အင်္ဂလိပ်စာ အနည်းငယ် ဖတ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ရွှီးတတ်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။ ကဲ စရအောင်။
ပထမဆုံး အနေနဲ့ Browser ကိုဖွင့်ပြီး facebook.com ကို သွားလိုက်ပါ။ ပြီးရင် Forget password ကိုနှိပ်ပြီး Account နာမည်နဲ့ ရိုက်ရှာလိုက်ပါ။ (profile link ထဲက id နံပါတ် သို့မဟုတ် user ရဲ့ text id ကိုလည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။) ပြီးရင် ပေါ်လာတဲ့စာတွေကို တစ်ဆင့်စီဖတ်ကြည့်ပြီး ကျွန်တော်က ဘယ်သူပါ။ ဖုန်းပျောက်သွားလို့ acc ပြန်ဝင်မရဘူး။ mail ထဲဝင်မရတော့လို့ ဘာညာသာရကာတွေရေးပြီး ကိုယ်ယူမယ့် Account ပိုင်ရှင်ဟန်ဆောင်ပြီး Facebook ဆီမှာ လိမ်ညာလှည့်ပတ်ပြီး တောင်းယူတာပါ။ Photoshop skill လေးလည်း ရှိလို့ကတော့ id အတုပါလုပ်ပြီး တင်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် (ပုံတွေက wall ထဲဝင်ကြည့်ရင် ယူလို့ရနေတာကို) Facebook team က တကယ်ထင်ပြီး reset link ပြန်ပို့လိုက်တဲ့အခါ Acc hack သည် ဆိုတာတွေ ဖြစ်လာတော့တာပါပဲ။
Recovery လို့ လူအများစုသိကြတဲ့ Impersonating (အယောင်ဆောင်လိမ်လည်ခြင်း) နည်းလမ်းနဲ့ Account ခိုးယူခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်တော့
၁။ မိမိနာမည် အစစ်အမှန် (မှတ်ပုံတင်နာမည်) ကိုသာ သုံးပြီး Account ဖွင့်ပါ။
၂။ Date of Birth ကို မှတ်ပုံတင်ထဲကအတိုင်း ထားပြီး only me လုပ်ထားပါ။
ဒါတောင် Fri တွေ က မြင်ရနိုင်ပါသေးတယ် ။
Fri ဖြစ်ထားပြီ info စုဖို့ အချိန်တော့ ရင်းရတာပေါ့။ 😁
၃။ Account ကို မှတ်ပုံတင်အစစ်နဲ့ ID ကြိုတင်ထားပါ။ Fb team က ဘယ်လိုပင် ပြန်ဖျက်တယ်ပြောပြော အချက်အလက်တွေကို မှတ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် recovery သမားတွေက ID အတု တင်လိုက်တဲ့အခါ အချက်အလက်ကွာဟမှုကြောင့် မအောင်မြင်နိုင်စေပါ။
၄။ မလိုအပ်ဘဲ Trusted Contact မသုံးပါနှင့်။ အချို့က Trusted contact သုံးဖို့အကြံပြုကြလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်က trusted ထည့်ထားတဲ့သူသည် တွေ့ကရာ link ကနေ ဝင်ကြည့်နေတတ်တဲ့သူမျိုးဆိုရင် သူ့ acc နဲ့တွဲဆက်နေတဲ့ ကိုယ့်အတွက်လည်း မလုံခြုံပါ။
၅။ two factor အဖြစ် login approval ခံထားပါ။ သို့သော် မပျောက်နိုင်မည့် ဖုန်းနံပါတ် ကိုသာ သုံးသင့်ပါတယ်။ backup code ကိုလည်း အိမ်မှာ အမြဲရှိမည့် မှတ်စု (or) diary စာအုပ်ထဲ ထည့်ရေးထားနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းပျောက် ဆင်းကဒ်ပျောက်တဲ့အခါ ကိုယ့်ဘာသာ ပြန်ဝင်မရမှာစိုးလို့ပါ 😁
၆။ ဒီအချက်ကတော့ ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ data နဲ့ ဖြတ်တဲ့စနစ်တွေ ဖြစ်တာမို့ Background ကနေ အင်တာနက်သုံးတဲ့ App တွေကို ဖယ်ရှင်းထားပြီး မလိုအပ်ဘဲ အင်တာနက်ပိတ်တာမျိုး မလုပ်ဖို့ပါ။ ကျွန်တော်တို့ Acc သည် active ဖြစ်နေချိန်မှာ recovery လုပ်သူတွေအတွက် အခွင့်အလမ်း အလွန့်အလွန်နည်းပါတယ်။ recovery လုပ်ပြီး Account ခိုးယူသူတွေသည် ကျွန်တော်တို့ အင်တာနက်ပိတ်ပြီး အိပ်မယ့်အချိန်မျိုးကို အဓိကထားလေ့ရှိကြပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာ အင်တာနက်ဖွင့်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာ forget password နဲ့ အယောင်ဆောင်လိမ်တောင်းခြင်းမျိုးအတွက် Fb က အလွယ်တကူ ပြန်ပေးမှာမဟုတ်လို့ပါပဲ။
ကဲ ဒါဆိုရင် လိုင်းပေါ်မှာ အများဆုံး ကြားနေရတဲ့ Fb hack နည်းဆိုတာကြီးကို ပြောပြပြီးသွားပြီ။ ဘယ်လို ကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်း ပြောပြီးသွားပြီနော်။
ဒုတိယနည်း မစမီ တစ်ခု ကြားဖြတ်ပြောပါရစေ။ ဘာလဲဆိုတော့ Social Engineering နဲ့ သက်ဆိုင်တာလေးပါ။ အချက်အလက် အတုတွေနဲ့ အယောင်ဆောင်လိမ်ညာတဲ့အခါ မွေးနေ့ မွေးလ မွေးရက်တွေ အတိအကျ လိုပါတယ်။ အဲသည်အတွက် မိမိတို့ရဲ့ DOB ကို ဖျောက်ထားလို့ ရတယ်ဆိုသော်ငြားလည်း ဘယ်သူဘယ်ဝါကတော့ ဒီနေ့မှာ မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီး Noti မှာ လာလာပေါ်တာ မြင်ဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ DOB ကို ဖျောက်ထားသည့်တိုင် တစ်ဘက်လူ (အယောင်ဆောင်) က သိနေနိုင်တဲ့အချက်ပါ။ အဲသည်တော့ ကိုယ့်ကို ရင်းနှီးအောင် စကားတွေလာပြောပြီး မွေးနေ့မေးတာမျိုး၊ အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ (ခုနှစ်တွက်ဖို့) မေးတာမျိုးကို သတိပြုသင့်ပါတယ်။
အတိုချုပ်ပဲပြောပါရစေ။ အချို့က မိမိတို့ရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်၊ dob ၊ မိမိချစ်သူ စသည်တွေကို password အဖြစ် ထားလေ့ရှိကြတာကြောင့် rv သမားတွေက အလွယ်တကူ ခန့်မှန်းဝင်ရောက်သွားနိုင်ခြင်းမျိုးပါ။ အချို့ကကျတော့ ဖုန်းဝယ်ရင်းနဲ့ ဖုန်းဆိုင်က Account ဖွင့်ပေးတာကိုပဲ သုံးတာမျိုးဖြစ်ပြီး password မေ့တာမျိုး ပြန်လာမေးရင် ဖြေရလွယ်စေဖို့ ဖုန်းဆိုင်တွေသည် တစ်ခုတည်းသော password ကိုသာ သုံးကြလေ့ရှိတာကြောင့် အလွယ်တကူ သိသွားခြင်းမျိုးပါ။
ရှေ့မှာလည်း ပြောပြခဲ့ပြီးပြီနော်။ Fb login ဝင်ဖို့အတွက် phone (or) mail မလိုပါဘူး။ profile link ထဲမှာ ဝင်လို့ရတာ ပါပြီးသားပါ။
ဘယ်လိုလဲတော့ ပြန်မမေးပါနဲ့။ ပြန်ဖတ်ပါ။
ဒီစာကိုရေးခြင်းက Fb acc ခိုးဖို့ မြှောက်ပေးလိုရင်းမဟုတ်ဘဲ ဘယ်လိုခိုးနေကြတယ်။ ဘယ်လို ကာကွယ်ရမယ်ဆိုတာကို ပြောလိုရင်းပါ။
ဒီနည်းကို ကာကွယ်ဖို့ကတော့ strong ဖြစ်မယ့် password မျိုးပဲ ထားပါ။
e.g. khitminnyo123, khitminnyo*124# လိုမျိုး Acc Name နဲ့တွဲပြီး လုံပြီလို့မထင်စေလိုပါ။ အလွယ်တကူ ဆိုတာ အဲဒါကိုပြောခြင်းပါ။
ဒီနည်းကို ခုသိပ်မတွေ့ရတော့ဘူး ဆိုပေမယ့်
တကယ်တော့ တွေ့နေရဆဲပါ။ PlayStore မှာ ရတဲ့ Auto liker ဆိုပြီး like ခိုးတဲ့ App တွေမှာလည်း Phishing ရော Session Stealing ရော တွဲပြီး တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ PlayStore ကနေ ဆွဲရင် စိတ်ချရတယ်ဆိုပြီး concept အလွဲကြီးမိနေတဲ့သူတွေ သိပ်များပါတယ်။ တကယ်တော့ PlayStore က ကာကွယ်ပေးတာက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖုန်းကို ပျက်စီးစေမယ့် အန္တရာယ်ရှိတဲ့ App တွေကနေသာ ကာကွယ်ပေးခြင်းဖြစ်ပြီး Phishing နဲ့ Session stealing မျိုးတွေကိုတော့ ကာကွယ်ပေးမှာမဟုတ်ပါ။ Token Access တွေကိုလည်း မိမိတို့ဘာသာ ကြည့်ရှောင်ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ google ကတော့ အဲဒါတွေအထိ ဝင်စစ်မပေးနိုင်ပါ။
မိမိဘာသာ တွေ့လို့ flag ထောင်ခဲ့ရင်တော့ စစ်ဆေးပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒီတိုင်းတော့ no ပါ။
ဒီတော့ စိတ်ချယုံကြည်ရခြင်းမရှိတဲ့ software တွေ၊ link တွေကနေ ဘယ်တော့မှ Account မဝင်မိပါစေနဲ့။
တိုတိပြတ် ပြောရရင် Access ရယူခြင်းပါ။
Fb နဲ့ login ဝင်ပါဆိုတာမျိုးမှာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ Fb နဲ့ ဝင်ခိုင်းတဲ့ app မျိုးတိုင်းကို မယုံရဘူးလို့ မဆိုလိုဘူးနော်။ ဒါပေမယ့် Fb နဲ့ ဝင်ခိုင်းတဲ့အခါ သူက ဘာတွေကို ယူသုံးမယ်ဆိုတာကို ပြလေ့ရှိပါတယ်။
သေချာပြန်စစ်ဖို့လိုတယ်ဗျ။ သူက ကိုယ့် Acc ကို ဘယ်အတိုင်းအတာအထိ သုံးမယ်ဆိုတာ အဲနေရာမှာ မဖြစ်မနေ ပြလေ့ရှိလို့ပါ။
ဒီနည်းက Account တစ်ခုလုံးကို ထိန်းချုပ်နိုင်တာမဟုတ်လို့ Acc ပါသွားစရာတော့မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Acc ထဲက အချက်အလက်တွေကိုတော့ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ ဝင်ကြည့်လို့ရစေပါတယ်။ Fb မှာတွေ့ရတဲ့ သင်ဘယ်တော့ကျဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာမျိုးကနေ သင့်အတွက် အဖြေသိရန်နှိပ်ပါဆိုတာတွေသည်လည်း Access ရယူတာတွေသာဖြစ်ပါတယ်။ အချက်အလက်အချို့ ပါသွားတာကလွဲရင် Acc ကို password ပြောင်းယူတဲ့အထိတော့ လုပ်မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ Recovery ဆွဲဖို့အတွက်တော့ လုံလောက်တဲ့အချက်အလက်တွေကို ရသွားစေနိုင်ပါတယ်။ သတိထားရှောင်ပါ။ ၂၀၂၀ မှာ သင်ဘာဖြစ်မလဲတို့။ ကမ္ဘာမှာ သင်နဲ့အတူဆုံး မင်းသား မင်းသမီးတို့ ဆိုတဲ့ တကယ်မဟုတ်တာတွေအပေါ် သာယာမနေနဲ့ပေါ့။ သာယာချင်ရင်လည်း ဝင်ပြီးတာနဲ့ ပြန်ထွက်ဖို့ မမေ့နဲ့ပေါ့ဗျာ။
ဒါက မကြာခဏ ကြုံတွေ့ရတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ ရင်းနှီးတဲ့သူက အကျင့်မကောင်းတာမျိုးပေါ့။ ကိုယ်က ကိုယ့်ဖုန်း ပျက်လို့ဖြစ်စေ၊ ဘက်ထရီကုန်သွားလို့ဖြစ်စေ အခြားတစ်ယောက်ရဲ့ ဖုန်း သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာ မှာ ခဏဝင်သုံးတဲ့အခါ saved password လုပ်မိတာမျိုး၊ နောက်တစ်ချက်က browser မှာ login ဝင်ပြီးရင် logout ပြန်မထွက်ဘဲ browser ပိတ်ခဲ့ရုံနဲ့ ပြန်ထွက်ပြီးပြီထင်တဲ့သူမျိုး၊ ကိုယ်ဝင်သုံးမယ့် ကွန်ပျူတာ မှာ Keylogger ရှိနေတာမျိုး၊ ကိုယ်က အခြားသူတွေရှိနေချိန်မှာ Account login ရိုက်ဝင်မိတာမျိုးတွေ ရှောင်ပါ။ ကွန်ပျူတာ ကီးဘုတ်ပေါ်က ကိုယ့်လက်လှုပ်ရှားမှုကိုကြည့်ပြီး password ခန့်မှန်းနိုင်သလို phone keyboard ကနေ ရိုက်ထည့်တဲ့အခါမှာလည်း password ကို ကြည့်နေသူက သိနိုင်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေရဲ့ Facebook Account ကို password ပဲ သိရုံနဲ့တင် ဝင်လို့ရတယ်ဆိုတာကို လုံးဝ မမေ့ပါနဲ့။
ဘယ်လို Acc ခိုးယူတယ်ဆိုတာတွေ သိပြီဆိုတော့ ဘယ်လိုရှောင်ရမယ်ဆိုတာ တွက်လို့ရပြီပေါ့။
Facebook ကို Hack သည်ဆိုရာဝယ်
ကျွန်တော်တို့ ပြောကြတာရှိသေးတယ်ဗျ။ ဘာတဲ့...... Facebook Hack နည်း ဘာညာသာရကာပေါ့။
ဒါက လူအများစုသိကြတဲ့ အပေါ်ယံအမြင်ပါ။ နည်းနည်းလေး ပိုပြီး အတွင်းကျကျ လေ့လာကြည့်ရအောင်။ လူပြိန်းနားလည်အောင်ပဲ ရေးပါရစေ။ ပညာရပ်အခေါ်အဝေါ်တွေကို တတ်နိုင်သမျှ ဒီအပိုင်းမှာ ရှောင်ရေးပါမယ်။ အမှန်ကို အားလုံး သိစေချင်လို့ပါ။
Facebook ဆိုတာ web server တစ်ခုပါပဲ။ ဆာဗာဆိုတာ အချက်အလက်တွေသိမ်းထားတဲ့ ဂိုထောင်တစ်ခုနဲ့ တူပါတယ်။ အဲသည် Facebook မှာ Account ဖွင့်သုံးနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့က client တွေပါ။ ဆာဗာကအချက်အလက်ကို ရယူအသုံးပြုသူ user တွေပေါ့။
Facebook account တွေအတွက် ထားတဲ့ Account server မှာ ကျွန်တော်အပါအဝင် အခြားသော Facebook အသုံးပြုသူတွေရဲ့ အချက်အလက်တွေနဲ့ လျှို့ဝှက်စကားလုံး (password) တွေကို သန်းနဲ့ချီပြီး သိမ်းဆည်းထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် Facebook ကို Hack နိုင်ပြီဆိုတာနဲ့ Account တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ ဇူကာဘတ် အပါအဝင် သန်းနဲ့ချီတဲ့ Facebook Account တွေကို တစ်ချက်တည်း ရသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှ Facebook ကို Hack တာလို့ ခေါ်လို့ရပါလိမ့်မယ်။
အဲလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ အပေါ်မှာ ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းမျိုးတွေနဲ့ မောင်ကကြီး၊ မခခွေးတို့ရဲ့ Account လေးတွေကို hack နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တောင် ဒါက Facebook ကို hack တာမဟုတ်ပါဘူး။ user လို့ခေါ်တဲ့ အသုံးပြုသူရဲ့ မသိနားမလည်မှုဆိုတဲ့ vulnerability ပေါ်အခြေခံပြီး hack တာပါ။ မောင်ကကြီးကို hack တာသာဖြစ်ပြီး Facebook ကို hack တာ လုံးဝလုံးဝ မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ။
ဒီတော့ ပညာရှင်တွေက Facebook hack တယ်လို့ ဘယ်အခါမှာမှ သုံးတယ်ဆိုတာ သိပြီထင်ပါတယ်။
Facebook သည် ကျွန်တော်တို့ Account တွေ လုံခြုံမှုရှိစေရေးအတွက် security professional တွေကို လစာတွေအများကြီးပေးပြီး ခန့်ထားပါတယ်။ သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ သူ့ဆာဗာရဲ့ လုံခြုံမှုအတွက် အချိန်ပြည့် စောင့်ကြည့်ပေးနေသလို ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုသူတွေအတွက်လည်း အချိန်ပြည့် လုံခြုံမှု ပေးနေပါတယ်။ ဒါတွေတင်မက Bug Bounty Programme တွေကိုလည်း ထားရှိပေးထားပြီးတော့ Facebook ရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး report (အစီရင်ခံစာ) ရေးပေးနိုင်သူတွေကိုလည်း ရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့ အားနည်းချက်အပေါ် ထိခိုက်နိုင်မှု အတိုင်းအတာနဲ့ တွက်ချက်အဖြေထုတ်ပြီး ထိုက်ထိုက်တန်တန် ဆုချီးမြင့်မှုတွေကို ပြုလုပ်ပေးလေ့ရှိတာကြောင့် Facebook ကို တကယ် hack လို့ ရနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ့တာနဲ့ (Facebook က သိရှိပြီး မပြင်ဆင်နိုင်သေးခင်မှာ) ချက်ချင်း report လုပ်ပြီး ဒေါ်လာ၃သောင်းလောက်ထိ ရနိုင်တဲ့ ဆုကြေးငွေပဲ ယူမှာပေါ့ဗျာ။ အဲလိုမလုပ်ဘဲနေရင် တစ်ယောက်ယောက်က ထပ်ရှာတွေ့သွားပြီး အစီရင်ခံလိုက်ရင် ကိုယ်ရမယ့်ဆုငွေ အခြားသူရသွားမယ့်အပြင် Facebook က fix လုပ်လိုက်တဲ့အခါ ကိုယ်လည်းသုံးမရဘဲ အလဟဿ ဖြစ်သွားရမှာပဲလေ။ ဒီတော့ Facebook ဆိုတာ အားနည်းချက်တစ်ခုတွေ့တာနဲ့ ချက်ချင်းရှာဖွေပြင်ဆင်နေတဲ့ Active security team ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသလို ပြင်ပလေ့လာသူတွေရဲ့ ကာကွယ်ပေးမှုတွေပါ ပူးပေါင်းဖြည့်စွက်ထားလို့ တကယ်ခိုင်မာတဲ့ လုံခြုံမှုရှိတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကိုတော့ only me post မျိုးနဲ့ မသိမ်းနဲ့ပေါ့ဗျာ။ ဒါတွေကတော့ system upgrade လုပ်တဲ့အခါတွေမှာ ပေါက်ကြားတတ်လို့ပါ။ နောက်ပြီး chatting မပေါက်ကြားချင်ရင်လည်း secret conversation ဆိုတာရှိတာကြောင့် အဲကနေ လုံခြုံစိတ်ချစွာ သုံးလို့ရပါသေးတယ်။ တစ်ဘက်က ကြည့်ပြီးတာနဲ့ ကိုယ်သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့အချိန် (ဥပမာ ၅စက္ကန့်) အတွင်း ပျက်သွားမှာဖြစ်လို့ သူ့ acc (or) ကိုယ့် acc ပါသွားခဲ့ရင်တောင် ဒါက ပေါက်ကြားစရာ မရှိတော့ဘူးပေါ့။
Facebook တင်မကဘူးနော်။ လိုင်းပေါ်မှာ တွေ့နေကြတဲ့ gmail hack ဆိုတာလည်း အဲသဘောတရားတွေအတိုင်းချည်းပဲဗျ။
ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Facebook hack လို့ နေရာတကာမှာ သုံးနေပြောနေကြမယ့်အစား တကယ့်အမှန်တရားကို သိရှိသင့်ပြီလို့ ယူဆပါတယ်။ နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ Hacking ဆိုတာ Facebook, gmail user တွေရဲ့ account လေးတွေကို ဝင်ကြည့်နိုင်ရုံလောက် အလွန်ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ ပညာရပ်မဟုတ်ပါဘူး။
Programming, Web Developing, Networking နဲ့ Server/System Administration တွေပေါ် အခြေခံထားတဲ့ Hacking ဆိုတာသည် ရှိသမျှ ကွန်ပျူတာပညာရပ်တိုင်းနဲ့ ဆက်နွယ်မှုရှိနေပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ယနေ့ခေတ်လို Cyber Security အတွက် လိုအပ်ချက်ပိုများများလာတဲ့ ခေတ်မှာ Facebook Account လေးတွေကို ဘယ်လိုခိုးရမလဲဆိုတာလေးနဲ့ Hacking ဆိုတာဒါပဲဆိုတဲ့ သေးသိမ်တဲ့အမြင်တွေကို စွန့်ခွာချိန်တန်ပြီဖြစ်ကြောင်း (ပေါ်ပင်) Hacker ပိုး ထ ကြသူအပေါင်းကို နှိုးဆော်တိုက်တွန်းရင်း နိဂုံးချုပ်ပါကြောင်းခင်ဗျာ....
Facebook ပေါ် က Hacking အယူအဆများ နှင့် Facebook hack နည်းများ အကြောင်း (Old Post)
Facebook တို့လို လူမှုကွန်ယက်တွေ တိုးတက်လာချိန်မှာ နည်းပညာအသစ်အဆန်းတွေကို လူတွေ ပိုစိတ်ဝင်စားလာကြပါတယ်။ နည်းလမ်းတွေ ရှာဖွေ ကြံဆ လာကြသလို နည်းပညာတွေကို ပိုပိုပြီး သိမြင်နှံ့စပ်လာကြပါတယ်။ အဲသည်လို နည်းပညာတွေထဲမှာမှ လူသိပိုများလာတဲ့ နယ်ပယ်တစ်ရပ်ကတော့ Hacking ပါပဲ။
Hacking မှာမှ လူတွေကြား ပိုပြီး Popular ဖြစ်တာက Facebook လို လူမှုကွန်ယက် တွေနဲ့ online game တွေ ချိတ်ဆက်နိုင်သလို Facebook account တွေနဲ့ပါ ချိတ်နိုင်တဲ့ gmail ကို ပိုပြီး လူသိများလာကြပါတယ်။ Facebook hacking မှ hacking, gmail hacking မှ hacking လို့ ထင်လာကြသလို hacking လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့တင် Facebook နဲ့ Gmail account တွေကို hack တာလို့ ပြေးမြင်ကြတဲ့အထိ Hacking ကို နယ်မြေဘောင်ခတ်ပစ်လိုက်ကြတော့တာပါ။
Hacking နဲ့ အခြား နည်းပညာ နယ်ပယ်တွေမှာ အမြင်ကျယ်ချင်ရင်တော့ အဲသည် ခတ်ထားတဲ့ ဘောင်တွေကို ဖယ်ပစ်နိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ အဲသည်ဘောင်တွေကို မိမိဘာသာ ခတ်ပစ်လိုက်ကြတာကို မမေ့ပါနဲ့။
ဥပမာလေး ပြောကြည့်ရအောင်။ အင်ဂျင်နီယာ နဲ့ ဆောက်လုပ်ရေး ကို လူတွေ တွဲ မြင်ကြလေ့ ရှိပါတယ်။ အင်ဂျင်နီယာတွေ သင်ခဲ့ရတဲ့ Engineering ဆိုတာ ပညာရပ်နယ်ပယ် (technical) နယ်ပယ်ပါ။ တိုက်ဆောက်တဲ့နေရာမှာသုံးရင် တိုက်ဆောက်ခြင်း ဖြစ်ပြီး တံတားထိုးတဲ့နေရာမှာသုံးရင် တံတားတည်ဆောက်ခြင်း ဖြစ်သွားပါတယ်။ အဲဒီ တည်ဆောက်မှုအပိုင်းတွေကကျတော့ အသုံးချနယ်ပယ် (field) ဖြစ်ပါတယ်။ Field မှာ မဆောက်ခင် Techniques (Technics) တွေ သိထား တတ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့ပြင် Field မှာ မိမိဘာသာ ဦးဆောင်မဆောက်မီ အခြားသူတွေရဲ့ ဆောက်လုပ်ရေး တွေမှာ ဝင်လေ့လာကူခြင်းဖြင့်လည်း လိုအပ်တဲ့အတွေ့အကြုံကို ရယူနိုင်ပါတယ်။
Hacking ပိုင်းနဲ့ ပြန်ချိတ်ရအောင်ပါ။ အထက်က ဥပမာလိုပါပဲ။ Hacking ဆိုတာ Technical ပိုင်း ပါ။ Gmail hacking, Facebook hacking နဲ့ web hacking ဆိုတာတွေက အသုံးချနယ်ပယ် Field ဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ဆောက်မယ့် အင်ဂျင်နီယာ သည် တိုက်ဆောက်နည်း တတ်မြောက်ဖို့လိုသလို တံတားတည်ဆောက်မယ့် အင်ဂျင်နီယာ သည်လည်း တံတားဆောက်လုပ်ခြင်း techniques တွေကို တတ်မြောက်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ထို့အတူပါပဲ Hacking field အတွက်လည်း သက်ဆိုင်ရာ Technics တွေကို သိထားတတ်ထားမှ အသုံးချလို့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
တိုက်ဆောက်နည်း technique တွေကို တိုက်ဆောက်တဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုခြင်း အားဖြင့် တိုက်ဆောက်ခြင်း ဖြစ်လာသလို သက်ဆိုင်ရာ technics တွေကို အသုံးချပြီး Facebook, gmail, website, server, .... အစရှိတာတွေ လုပ်ဆောင်ရာမှ Facebook hacking, gmail hacking, website hacking, server hacking, web cam hacking, .... စတဲ့ system hacking ဆိုတဲ့ field (အသုံးချနယ်ပယ်) တွေ ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။
Facebook တို့ Gmail တို့ ကို hack တယ်လို့ ဆိုရာမှာတော့ အများစု မသိကြတဲ့ အပိုင်းလေး အနည်းငယ် ပြောပြချင်ပါတယ်။ Account ဖွင့်သုံးနေကြတဲ့ Facebook တို့ Gmail တို့လို့ Acc တွေအပေါ် ကျွန်တော်တို့ သာမန်မြင်နေတာတွေ ခဏဖယ်ထားလိုက်ရအောင်။
အဆိုပါ Account တွေမှာ Level နှစ်ခု ရှိပါတယ်။ အသုံးပြု (user) က ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ထိန်းသိမ်းရတဲ့ user level နဲ့ မူလပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Facebook တို့ Google တို့ကနေ ထိန်းသိမ်းထားရှိတဲ့ Server level ပါ။ User level အနေနဲ့ ဖွင့်ထားတဲ့ gmail ကို hack လို့ ရ သွားရင် Account တစ်ခုသာ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Server level အနေနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးထားတဲ့ gmail accounts server ကို hack လို့ ရသွားရင်တော့ သန်းနဲ့ချီတဲ့ Accounts တွေကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ရရှိသွားနိုင်ပါတယ်။ account server မှာက သန်းနဲ့ချီတဲ့ Account တွေကို သိမ်းထားတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ user level နဲ့ server level ကွာတာလေးတစ်ခု ထုတ်ပြောပြတာပါ။
Server level မှာက Facebook တို့ Google တို့ရဲ့ security team က ပညာရှင်တွေနဲ့ အချိန်ပြည့် စောင့်ကြည့်ပေးနေကြသလို bug bounty programme တွေ ပြုလုပ်ထားရှိပြီး Vulnerability ခေါ် အားနည်းချက်တွေကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး report တင်ပေးနိုင်သူတွေအတွက် ထိုက်ထိုက်တန်တန် ဆုကြေး ချီးမြင့်ပေးခြင်းအားဖြင့် လုံခြုံမှုကို ပိုမိုခိုင်မာလာအောင် ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။
User level မှာတော့ မိမိတို့ရဲ့ Account ကို မိမိတို့ဘာသာ ထိန်းသိမ်းကြရပါတယ်။ Phishing link တွေကနေ မဝင်မိအောင် url တွေကို သေချာစစ်ဆေးတတ်ဖို့လိုသလို encrypt ပြုလုပ်မထားတဲ့ ကွန်ယက်တွေမှာ သုံးမိတာမျိုး၊ free ပေးပြီး ထောင်ဖမ်းတဲ့ wifi ကွန်ယက်မျိုးတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်သုံးမိပြီး login ဝင်မိတာတွေ၊ weak passwords တွေလို အလွယ်တကူခန့်မှန်းနိုင်စေတဲ့ password တွေ အသုံးပြုတာမျိုး၊ အချက်အလက် ကောင်းစွာ ဖြည့်သွင်းထားခြင်းမရှိတာမျိုး၊ security layer ထားရှိအသုံးပြုခြင်းမရှိတာမျိုး တွေကို အထူးဂရုပြုမိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်ကတော့ ထိုက်သင့်တဲ့ security knowledge တွေ ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Facebook ပေါ်မှာ acc hack ခံရပါတယ် ဆိုတာတွေထဲက အချို့က တကယ် hack ခံရခြင်းမဟုတ်ပါ။ အချို့က မိမိ acc ဖွင့်စဉ်က mail ရော password ရောကို မိမိဘာသာ မှတ်ကိုမမှတ်မိတော့လို့ ဝင်မရတော့တာမျိုးကို hack ခံရတယ်ဆိုပြီး (မသိဘဲ) ပြောကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ် Account ပါသွားသူတွေကလည်း အောက်ပါ အချက်တွေကြောင့် ပါသွားကြတာပါ။
1.မိမိ acc မှာ မိမိဘာသာ hack ခံရကြောင်း တမင် ဖန်တီးလုပ်ကြံထားတာ
2. ဒီ link ကိုနှိပ်ကြည့် ဘာဖြစ်မယ်။
သင့်အဖြေကိုသိဖို့ ဒါလေးနှိပ်ကြည့်ပါ ဆိုတဲ့ post မျိုးတွေ တွေ့မိကြမှာပါ။ အဲသည်ကနေ user ရဲ့ အရေးပါတဲ့ information တွေနဲ့ token access ကို ခိုးယူခံရတာ
3. စိတ်ချရခြင်းမရှိတဲ့ app တွေကို login with Facebook နဲ့ ဝင်ထားမိတာ
4. Information အပြည့်အစုံ ထည့်ထားခြင်းမရှိတာကြောင့် ဖြစ်စေ၊ security layer တွေ အသုံးမပြုတာကြောင့် ဖြစ်စေ recovery ဆွဲခံလိုက်ရတာ
5. သေချာ သိခြင်းမရှိပါဘဲက Free wifi တွေချိတ်ပြီး အရမ်းကာရော login ဝင် သုံးမိတာ
6. "Follower တွေ ဘယ်လောက်ရမယ်"
"သင့် fri ထဲက ဘယ်သူတွေရဲ့ လျှို့ဝှက် ဗီဒီယိုဖိုင်တွေ ပေါက်ကြားသွားပါတယ်။ သိချင်ရင် ဒီ link ကိုကြည့် "
စသည်ဖြင့်ပေါ့။ user တွေကို စိတ်ဝင်စားအောင် ဆွဲဆောင်ပြီး phishing ချထားတဲ့ link ထဲ ဝင်အောင် စည်းရုံခြင်းကို မသိဘဲ ဇွတ်ဝင်ရာက account ပါသွားတာ။
Gmail hacker ဆိုတဲ့ software အတုတွေကို သူများ account ရချင်ဇောနဲ့ ကိုယ့် acc ဝင်မိရာက သူများဟာမရဘဲ ကိုယ့်ဟာ ပေးလိုက်ရတာ။
(6 နဲ့7ကို Social Engineering ဟု ခေါ်သည်)
8. ကိုယ် ယုံကြည်ရသူ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ Facebook account နဲ့ တထေရာတည်း တူအောင် အတုဖွင့်ထားပြီး အယောင်ဆောင် အယုံသွင်းလျက် account လုယူခံရတာ
9. ကိုယ့်ဖုန်းထဲကို စိတ်ချယုံကြည်ရခြင်းမရှိတဲ့ apk တွေ သူများထည့်သွားတာမျိုး၊ ကိုယ့်ဘာသာ ဆွဲထည့်မိရာမျိုးတွေကနေတစ်ဆင့် Plugin ပါလာတဲ့ keyloggers တွေကနေတစ်ဆင့် ကိုယ့် acc တွေ ပါသွားတာမျိုး
ကိုယ့်စက်မဟုတ်ဘဲ အခြားသူတွေရဲ့ စက်တွေ (ဖုန်း or computer) တွေမှာ ကိုယ့် acc ခဏ ဝင်သုံးမိရာကတစ်ဆင့် account ပါသွားတာမျိုး
10. Account login ဝင်တဲ့နေရာမှာ အားနည်းလွန်းတဲ့ (ခန့်မှန်းရ လွယ်ကူတဲ့) passwords တွေကို သုံးမိတာမျိုး၊ နောက်ပြီး ဘာ acc ဆိုလည်း ဖွင့်၊ ညာအကောင့်ဆိုလည်း ဖွင့်၊ passwords ကို ဘာလာလာ ဒီတစ်မျိုးပဲ လုပ်ပြီး မှတ်ထားတာမျိုး
အထက်ပါအချက်တွေကြောင့်သာ ဖြစ်လေ့ ရှိပါတယ်။
ဒါက user level နဲ့ သက်ဆိုင်ပြီး account ကို အသုံးပြုသူက သတိထားရမယ့် အပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Facebook (or) Google တို့က သူတို့ရဲ့ အကျိုးအမြတ်အတွက် မဟုတ်ရင်တောင် ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် server level ကနေ တတ်နိုင်သမျ တိုးမြှင့် ကာကွယ်ပေးမှုတွေ လုပ်ထားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် server level ကနေ ဘယ်လိုပင် ကာကွယ်ပေးထားပါစေ user တွေအနေနဲ့ မိမိတို့ လုံခြုံရေးအတွက် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေကို ဂရုစိုက်လိုက်နာဖို့တော့ လိုပါတယ်။
Account ကာကွယ်ရေးတွေ နဲ့ ဘယ်လို ခိုးသွားတယ်ဆိုတဲ့ နည်းတွေကို ပြောနေတာနဲ့ပဲ မူလ ရည်ရွယ်ချက် ပျောက်တော့မယ်။ 😁
အစပိုင်းမှာ ကျွန်တော် ဆွေးနွေးခဲ့သလိုပါပဲ။ Hacking ဆိုတာ technical ပိုင်းပါ။ Gmail ကို hack တယ်၊ Facebook ကို hack တယ်၊ website ကို hack တယ် ဆိုတာတွေဟာ အသုံးချမှုနယ်ပယ် field သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ Hacking technics (techniques) တွေကို ကျွမ်းကျင်လာတဲ့အခါ ဘယ်နေရာမှာ ဘာသုံးရမယ် (တိုက်ဆောက်ရင် ဘယ်လိုဆောက်မယ်၊ တံတားကျ ဘယ်လို ထိုးရမယ်) စသည်ဖြင့် ကျွမ်းဝင်လာပါတော့တယ်။
နောက်တစ်ချက်က Facebook ပေါ်မှာ အများစု သိနေ ထင်နေကြသလို Hacker တွေဆိုတာ လူဆိုးတွေချည်းပဲ မဟုတ်ကြပါဘူး။ ဘယ်နေရာမဆို အဖြူနဲ့ အမည်း၊ အလင်းနဲ့အမှောင် ဆန့်ကျင်ဘက်တွေ ရှိကြပါတယ်။ မိမိရဲ့ လုပ်ရပ်နဲ့ ရပ်တည်မှုအပေါ် မိမိဘာသာ တာဝန်ယူကြရမှာပါ။
ဒါကြောင့် နည်းပညာတွေကို လူအများအတွက် ထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိစေဘဲ တိုးတက်အောင်မြင်အောင် ကြိုးစားရင်း အမှန်တရားကို သိမြင်လက်ခံ မှန်ကန်စွာရပ်တည်ကျင့်ကြံရင်း လောကကို အလင်းပေးနိုင်သူများ ဖြစ်ကြပါစေကြောင်း နှစ်သစ်ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ရပါသည်ခင်ဗျာ
လာရောက် အားပေးဖတ်ရှုသူအပေါင်းကို အထူး ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ
Hacking ကို လက်တွေ့ချည်း လေ့လာလိုသူတွေအတွက် Grade3Hacking "Hacking ဒုတိယတန်း" စာအုပ်ကို အားပေးနိုင်ပါပြီဗျ ..........
By KhitMinnyo on August 15, 2018
Labels: Articles, Hacking, Hacking Knowledge, Hacking Techniques, ဆောင်းပါး
Anonymous September 20, 2018 at 9:10 PM
​တော်​​တော်​ဖတ်​လို​ကောင်းပါတယ်​ အကို​ရေ ဆက်​လက်​အား​ပေးလျက်​
orange January 18, 2019 at 4:15 PM
Unknown May 28, 2019 at 6:50 PM
Unknown May 28, 2019 at 7:06 PM
Anonymous July 3, 2019 at 10:33 AM
Thanks for sharingbknowledge
Unknown August 30, 2019 at 8:51 PM
Anonymous September 19, 2019 at 6:07 PM
Unknown December 25, 2019 at 3:32 AM
Hehe hoho October 18, 2020 at 12:56 AM
Han Nyein Oo ဆိုတဲ့ ဆရာကိုသြှားကတော့ တကယျ့ ဆရာကွီးတဈယောကျပါ
GR4Y_MX January 2, 2021 at 6:37 AM
han nyein oo က ကိုသြားမို့လို့လား
Unknown September 22, 2021 at 12:50 AM